Iinwele ezilungileyo zamadoda | Amadoda aQinisekileyo
Iklabhu yamaGentlemen | | Ukunyamekela, yokuPhila, fashion
Ambalwa kakhulu amadoda bayazinyamekela iinwele zabo njengoko kufanelekile kwaye nobuganga bokwenza njalo Utshintsho kwinkangeleko Kwaye nokukama iinwele zakho ngendlela eyahlukileyo neyomeleleyo. Impazamo enkulu, kuba ibaluleke njenge-wardrobe yethu, iziqholo zethu okanye izixhobo zethu zezinwele. A iinwele ezimenyezelayo, ithambile, isilika inokwenza nabani na ukuba athande, ke lungela ukuzama iindlela ezintsha kwaye usete imikhwa phakathi kwabahlobo bakho.
Inwele esele inemfashini phakathi kwesini esiyindoda yile Eshiya, igqibelele ukujonga ulutsha. Sisicelo esisebenzayo nesilula ukufezekisa, esiza kuthi siphumeze isitayile esingaqhelekanga kunye nomoya ovukelayo. Icebo lokufezekisa oku kukuhambisa iinwele kumaleko, ewe, kungcono ukuba uzishiye ezandleni zomgcini weenwele zakho. Ukuyidibanisa, kuya kufuneka uyinike ivolumu ngeminwe yakho kwaye usebenzise imveliso ukuze ufumane amandla ngakumbi kwaye uchaze amandla.
Enye inwele ephumelele kakhulu ngeli xesha lonyaka lelokubheja kuhlobo oluthile iqela. Iinwele ezi-Lush, ii-bangs ezinde eziguqulwe kancinci kwaye zahlukana kwelinye icala. Abantu abadumileyo kunye nabadlali bebhola ekhatywayo bayazi okuninzi malunga nokusetha imeko, kodwa buza uDavid Beckham, owenza le nto inemfashini.
Xa ukhetha i-hairstyle kufuneka uyithathele ingqalelo iimpawu zakho, kunye nokumila kobuso, ekubeni umntu ngamnye ethanda inwele enye kunenye. Ukuba unobuso obusisazinge okanye obunesikwere, unganxiba phantse naziphi na iinwele, ngelixa unobuso obude, kungcono ukukhetha isitayile esidumbileyo okanye esirhabaxa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iinwele ezilungileyo zamadoda
I-Lotus kunye nengqokelela yeempahla zakhe